रेशम चौधरीको खुट्टाको नेल चर्चामा, कसले के भने ? |
रेशम चौधरीको खुट्टाको नेल चर्चामा, कसले के भने ?
On: २०७६ असार ७ गते, शनिबार, ११:४३ बजे प्रकाशित
काठमाण्डौ । डिल्लीबजार कारागारमा जेल सजाय भोगिरहेका राजपाका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । फोक्सो र ढाडमा समस्या देखिएपछि चौधरीलाई बिहीबार अस्पताल भर्ना गरी उपचार थालिएको हो । उपचारका क्रममा पनि चौधरीको खुट्टामा प्रहरीले मोटो नेल लगाइएको छ । नेल मात्रै होइन, त्यहाँ उनलाई कडा सुरक्षाभित्र राखिएको छ ।
चौधरीलाई अस्पतालमा परिवारका सदस्य र जेल प्रशासनबाट खटिएका हतियारधारी प्रहरीले कुरिरहेका छन् । उनलाई कम्तीमा १० दिन अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकले बताएका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुअघि २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा एसएसपी र नाबालकसहित नौ जनाको हत्या भएको घटनामा चौधरी संलग्न रहेको निष्कर्षसहित जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । टीकापुर घटनापछि भारतमा लुक्दै आएका चौधरी २०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा कैलाली–१ बाट सांसद निर्वा्चित भएका थिए । सरकारले राजपाको दबाबमा हिरासतमा रहेका चौधरीलाई गत पुस ११ मा शपथग्रहणको मौका दिएको थियो । जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि भने उनी सांसदबाट निलम्बित छन् ।
चौधरीको उपचारमा सरकारले अपनाएको रवैयाप्रति समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन् । साथै उनले सर्लाही घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
चौधरीलाई १४ किलोको नेल लगाइएको घटनालाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला भट्टराईले पनि आलोचना गरेका हुन् ।
चौधरीलाई भेट्न शुक्रबार वीर पुगेका भट्टराईले खुट्टामा नेल लगाइएको तस्वीर पोस्ट गर्दै सरकारलाई मानवअधिकार र नियम कानून स्मरण गराएका छन् ।
भट्टराईले मात्रै होइन, सामाजिक संजालमा अधिकांशले उपचार भइरहँदा पनि खुट्टमा नेल हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सांसद रेशम चाैधरीसंग शत्रुवत व्यवहार गरेकाेछ सरकारले । याे बर्बर सरकारी ब्यबहारका बारेमा के भन्छन देशका बिज्ञ जन र मानव अधिकारवादी? खुट्टामा नेल ठाेकेर अस्पतालमा उपचार । गडबड छ याे अाेली तन्त्र । pic.twitter.com/n5gwleJ196
चौधरीको कसुरअनुसार सजायँ हुनु स्वभाविक भए पनि अस्पतालमा पनि नेल कायम राखिनु अमानवियता भएको कतिपयको तर्क छ ।
म रेशम चौधरीका धेरै काम कुराहरूसँग असहमत छु, हुन पाउँछु भन्दा डर लाग्दैन। तर उनलाई नेलले बाँधेर दिनदहाडै मुलुकको राजधानीमा यात्रा गराउने लोकतान्त्रिक सत्तासँग भयानक डर लागेको छ। मेरो डर हटाउनका लागि नेल लगाउनेहरूमाथि कारवाही गर, लोकतन्त्रको लाज बचाऊ ।
— Binod Dhungel (@BinodDhungel) June 22, 2019
जनताले चुनेको जनप्रतिनिधि रेशम चौधरी माथी गरिएको यो अमानवीय व्यवाहारको भत्सर्ना गर्दछु, नेपाल सरकारले यसमा चिन्तन गरोस । यो अत्याचारको परकाष्ठा हो । pic.twitter.com/zLU4cxwXl3
— Prakash Timalsina (@prakashujyalo) June 21, 2019
२०७६ असार ७ गते, शनिबार, ११:४३ बजे प्रकाशित